Nepal/ Grande-Bretagne : Ireo Ghurkas, tantara lavabe mahakasika ny fanavakavahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2018 11:42 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, বাংলা, Español, 简体中文, 繁體中文, English
Ghurkas mpiady taloha, nandritra ny matso tamin'ny Andron'ny Fahatsiarovana, sary avy amin'ny mpampiasa Flickr, Rodderz
Efa ho taonjato roa izay no manompo ny mpanjakavavy sy i Angletera ireo Ghurkas, araka ny iantsoana ireo tanora Nepaley mirotsaka ao amin'ny tafika britanika. Tsy dia tena rariny anefa ny nataon'ny fanjakana britanika raha ny resaka fanomezam-boninahitra noho ny firotsahany sy ny sorona nataon'izy ireo.
Tamin'ny herinandro lasa teo, nampanakoako ny sosokevitra farany nataon'ny fanjakana ny gazety sy ny tontolon'ny blaogy britanika, fatiantoka ho an'ireo mpiady taloha tao amin'ny Brigadin'ny Burkhas [amin'ny teny anglisy]. Maneho ny heviny [amin'ny teny anglisy] mikasika izany i Anna Raccoon, mpanoratra ny blaogy:
Rehefa nahafantatra fa efa nangataka 500 000 £ (560 000 €) sahady ho an'ny trano fialany sasatra ny mpikambana dimy ao amin'ny Parlemanta, mpisolotena ny sampana ara-politikan'ny IRA ary tsy mbola nandray ny toerana maha-parlemantera azy akory aza, mandritra izany, sy nilazàna fa ”tsy ananantsika ny fahafahana” hamela ireo Gurkhas 1 500, izay niady ho an'ny tafika britanika nandritra ireo ady lehibe natrehany – tamin'ny ady voalohany tao Afganistana sy tamin'ilay, vao haingana, tao Iraka, tao Bosnia sy Malouines ihany koa-, hipetraka ao Angletera. Nefa isika afaka ”mamerina mampiantrano” ”miaramila” taloha tao amin'ny IRA ao Laondra anaty trano mitentina 5 400 £ (6 020 €) isam-bolana – isam-bolana!-, efa misy fahitalavitra ”Samson” misy efijery 70 cm sy fitaovana home-cinema Sony.
Mba marina, mety mba nanontany tena ireo Gurkhas androany maraina sao diso miaramila nanatodihany ny fitaovam-piadiany ry zareo. Araka ireo mpiaro ny tolon-dry zareo, nifantoka tamina ”lainga voarary sy eritreritra adaladala” amin'ny filazana fa handany 1.4 lavitrisa livres amin'ny volan'ireo mpandoa hetra ny famelana ireo Gurkhas hipetraka ao Grande-Bretagne.
Maneho ny heviny avy ao Shanghai, ”kiriko tamin'ny fihetsiky ny fanjakana britanika manoloana ireo Gurkhas” ny blaogera Paul French. Milaza ho manohana ny fanentanana ho an'ireto farany ireto izy amin'izao fotoana izao , fampielezankevitra tarihan'ilay mpilalao sarimihetsika Joanna Lumley :
Misy fanentanana atao amin'izao fotoana izao mba hanohanana ireo Gurkhas sy hanaovana tsindry amin'ny fanjakana britanika mba hanampiany azy ireo kokoa sy hikarakarany azy tsara. ” Gurkha Justice ” no anarany, nanaitra ny eritreritry ny vahoaka ary nahazo fanohanana marobe. Nanolotra tolo-kevitra iray ny Demokraty Liberaly nandritra ny fifidianana tao amin'ny Antenimieran'ny Faribohitra tamin'ny 29 aprily 2009., izay mangataka ny fahazoan'ny Gurkhas rehetra ny zo, na dia ny hipetraka ao Angletera fotsiny aza. Niafara tamin'ny faharesen'ny fanjakana izany, vato nanaiky 267, vato nanohitra 246, ny faharesena voalohany indrindra azon'ny fanjakana tamina tolokevitra taorian'ny 1978. Tsy afaka mandidy na amin'ny inona na amin'ny inona ilay fifidianana nataon'ny Antenimieran'ny Faribohitra, fa dia manala baraka ny fanjakana fotsiny ihany. Kanefa mbola manohy ny mitanila sy mila kisa ihany i Phil Woolas, Minisitry ny Fifindramonina (izay, araka ny tadidiko, dia mpangirika, mahasorena, tia tena, raha fony izy nitantana ny Firaisana Nasionalin'ny mpianatra izy raha mbola teny amin'ny Oniversite aho – mpihatsaravelatsihy mahatsiravina sady matavy ratsy, izay toa tsy niova na ny kely aza).
Raha toa ka eo afovoan'ny adihevitra maro ny zon'ny Gurkhas hipetraka ao Grande-Bretagne sy ny fahazoany fisotroan-dronono mendrika azy, voaresaka ihany koa ny olan'ny firazanana sy ny fanavakavaham-bolonkoditra. Manoratra noho izany ao amin'ny tranonkala Spiked i Brendan O'Neill [amin'ny teny anglisy]:
Toy ny olona sokajy faharoa foana no niheverana ireo Gurkhas, toy ny olona tsy mivadika fa manokana, toy ny firazanana iray hafa mihitsy, toy ny tsy mahay noho ireo fotsy mpitarika tao amin'ny tafika britanika, fa mendri-pitokisana kokoa miohatra amin'ireo nepaley vahiny tsy tiana toetra, birmana na indiana ankehitriny. Raha ny marina, efa ela no misolo tena ny endrika ara-drafitry ny tsy fitoviana ireo Gurkhas: noforonina ary nokarakaraina izy ireo, tsy noho ny rendrarendram-pomba britanika, fa noho ny fanavakavaham-bolokoditry ny Britanika.
Fa tsy ny rehetra no manohana ireo Gurkhas. Manoratra i Peter Wilby, ao amin'ny tranonkalan'ny gazety New Statesman [amin'ny teny anglisy] fa ”mpikarama an'ady fotsiny ihany ireo Gurkhas”, fa ihany koa:
Tsy miady noho ny ”fitiavany an'i Grande-Bretagne na ny Mpanjaka” izy ireo (mba hangalana ny tenin'ireo mpankasitraka azy), tsy misy hafa amin'ireo mpikarama an'ady sy mpilalao cricket afrikana tatsimo milalao ho an'ny Leicestershire noho ny fitiavany ireo zanatany, mpandala ny fihazana amboahaolon'ny faritany, sy ny ambanivohitra be lohasaha. Efa taonjato roa izao no niforonan'ny rezimantan'ny Gurkhas, rehefa nanafika an'i Nepal ny tafika britanika, ary satria tsy niatrika afa-tsy miaramila mpanohitra vitsivitsy, dia nanoso-kevitra hanakarama azy ireo hiditra ao amin'ny tafikantsika. Milaza ny fifanarahana natao tamin'ny 1947 fa ny miaramila Gurkha iray, raha toa ka nanatevin-daharana ny tafika britanika izy (maro ireo nisafidy ny hiditra tao amin'ilay tafika indiana vao nahaleotena), dia ” tokony raisina hiditra amin'ny maha-olom-pirenena Nepaley azy ireo… manompo toy ny olom-pirenena nepaley ary [averina] ampidirina ho toy ny olom-pirenena nepaley ”. Kely karama noho ireo miaramila teraka britanika izy ireo — izay lasa naharenoka ny Ministeran'ny fiarovana — fa betsaka dia betsaka ilay vola araka ny fenitra eo an-toerana.
Naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny YouTube mikasika ny olan'ireo Gurkhas ihany koa ny teratany britanika maro hafa .